कोरियाको सबै भन्दा ठूलो नेसनल म्युजियम अफ कोरिया कस्तो छ ? - Fonij Korea
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता | प्रकाशीत मिति: February 2, 2019
तँपाई दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ ? भने कतिको घुम्नु हुन्छ ? अनि कोरियाको सबै भन्दा ठूलो नेसनल म्युजियम अफ कोरियाकाे बारेमा थाहा छ ? थाहा छैन भने याे भिडियाे हर्नुहाेस् । काेरियाका बिभिन्न ठाउँमा घुम्ने दुई जना पत्रकार छन् । यस पटक गोकुल थोकर र सिमा लामाले कोरियाको ठूलो मानिने नसनल म्युजियम घुमेका छन् । दुबै जनाले त्यहाँका कलाकृति र रमाइला पक्षहरु देखाउने प्रयास गरेका छन् । फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने घुम्नुहोस् । कोरियामा हुनुहुन्न भने भिडियो हेनुहोस् । भिडियो रमाइलो छ ।